के हो तान्त्रिक शा’री’रिक स’म्पर्क ? किन लोकप्रिय बन्दै छ यो बिधि ? - ramechhapkhabar.com
शा’री’रिक स’म्प’र्कका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ । यी बहसहरूमध्ये पछिल्लो समय चर्चा शुरु भएको छ तान्त्रिक शा’री’रिक स’म्प’र्क । केही अनुसन्धानले तान्त्रिक शा’री’रिक स’म्प’र्कमा सहभागी जोडीले भरपुर सन्तुष्टि पाउने उल्लेख छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार युवाहरु तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्कमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।
तान्त्रिक शारी’रिक स’म्प’र्कमा सम्पर्क कायम गर्ने वातावरण शान्त, खुला र एकान्त हुनुपर्छ । अध्यारो कोठामा मैन बत्ती बालेर धिमा प्रकाशमा सजिलो र फराकिलो बेडको व्यवस्थामा गरेर बनाइने शा’री’रिक स’म्पर्कलाई तान्त्रिक शा’री’रिक सम्प’र्क भन्छन् ।
शरीर नछोइकन सामिप्यता महसुस भएपछि मात्र अन्य क्रियाकलाप क्रमश सक्रिय हुन थाल्छन् । दुवैजना भावनात्मक रुपले तयार भएपछि सामान्य विधिबाट गरिने शा’री’रिक स’म्प’र्कलाई तान्त्रिक शा’री’रिक स’म्प’र्क भनिन्छ ।